Taariikhda My Butros » 6 Taariikhda Summer Fikradaha
Samee sizzle xagaagan – waxaannu la tegaynaa top 6 taariikhda fikrado xilli ciyaareedkan!
1. Tag tug
Bax halkaas oo arag kuwa meelaha aad la micno ah in aad aragto oo dhan. Ma aha oo kaliya ayaa xaqiijiyay in cilmi-socodka hagaajinaysaa caafimaadka, waxay sidoo kale kuu ogolaanayaa waqti iyo meel ay si dhab ah u hesho in la ogaado taariikhda. In badan oo xiiso leh meesha, ka aamuska yar sirgaxan aad leedahay doonaa – sida waxaa mar walba noqon doonaa wax ay ka hadlaan!
2. wada Hit jimicsiga
Haddii aad tahay qof u xamaasadeysan oo taam ah ama bilaabin kaliya baxay, socday gym ah had iyo jeer waa ka badan xiiso leh gym-jaalle. Adiga iyo taariikhda noqon kara tababaraha kasta oo kale ee shakhsiga ah, iyo in la abuuro aad xerada boot gaar ah muddo labo. Waa habka ugu fiican in loo Waxyoodo ahayn tartan caafimaad qaba oo u dhexeeya aad.
3. Tag dhacdo ciyaaraha maxalliga ah
Tag ciyaar maxalliga ah – wada. Kalsoonow ee ka tirsan kooxda la tallaabadaas faraha xumbo. nafsaddiinna ku waayaya in jawiga badnaa – waa adag tahay in aan u xiise halka qabanayaan ruxruxo! Haddii aad dareensan tahay geesi, waxaad mar walba isku dayi kartaa oo aad hesho fariin taataabtay on Jumbotron ah.
4. Campout laba
Samee ugu kuwa habeenkii xagaaga. Waxaa jira raqiis ah, madadaalo (oo gebi ahaanba ka taataabtay) taariikhda sugaya midig ee Backyard. Calan teendho, oo wuxuu ku raaxaysan snuggling ah habeen taariikh jaceyl oo cirka ah xagaaga samada ka hoosaysa!
5. Zoo Taariikhda
Safarka A si zoo waa hubi inaad ka soo bixiya kid aad la this fikrad taariikhda hal abuur leh! Iyada oo xoolaha aad u badan si ay u arkaan, aad nabad gelyo ku ruxruxaa karaa in wax kasta oo aamuska sirgaxan. Tag on, tusto taariikhda sida duurjoogta ah oo iyaga ku saabsan waxaad tahay!
6. berry gaaray
Summer waa markii ugu fiican inay dibadda u hesho iyo soo qaado berry adiga kuu gaar ah, iyo waxa aad ka dhigaa fikrad taariikhda quruxsan xiiso leh oo gaar ah. Markaas ka dib guriga ku soo noqon inuu ka soo leexdo berry kuwa galay dawayn macmacaan macaan.